Uma indlu amaphela, bese besola umnikazi, kubalulekile ukuba ahlanzekile ngokuphelele. Izicabucabu futhi amabhu ukuqeda isimiso esitholakala ilula. Futhi indlela ukuze uthole izintuthwane aphume efulethini? Lezi zinambuzane ezincane singene igebe Amazing kakhulu, ukudla ichithekile, athwale izingodo aye nazo ukutheleleka kanye etinkingeni letinyenti. Household izintuthwane - inkinga enkulu.
kalula ukungena ekhaya usebenzisa lingakanani encane. Isetshenziswa njengesici imifantu e izindonga noma uhamba isisekelo, Ukushisa kanye amapayipi nezokuxhumana. Household izintuthwane, futhi ngokuthi ebomvu (noma kaFaro), kakhulu othanda amaswidi, ngakho ungamangali ukuze uwathole ushukela noma imbiza jam. Nokho, ziyisici omnivorous, futhi uma ukuthola amnandi, kungekho intshiseko kancane ukuthi usephutheni kweminye imikhiqizo. Kanjani ukubonisa ezibomvu aphume efulethini? Lena isayensi yangempela, ngoba ukususa kunzima kakhulu futhi ngeke nakancane sihambisane nakho. Uma ungenalo ukulwa ne izinambuzane, ziyakwazi indawo yokuhlala ezindlini eziningi ngesikhathi esifushane enezikhukhula. Kwezinyanga ezimbalwa nje ngemva ukubukeka izinambuzane ngokoqobo nomaphi: e ukudla, embhedeni, izingubo.
Ukuze bayisize izisulu ayehlasela, sinikeza ezinye zezindlela eziphumelela kakhulu ukuthi ungathola kanjani izintuthwane aphume efulethini. Okokuqala, impela yokweba himsredstva - dichlorvos futhi umcako "Masha". Dichlorvos muhle fafaza esidlekeni izintuthwane, kodwa bakuthola kunzima kakhulu, futhi ngokuvamile akunakwenzeka, kodwa uma ehluleka, umphumela kuqinisekisiwe. Chalk isetshenziswa ku emikhondweni izinambuzane, ne ukulindela ukuthi kuyoba ubuthi ngokwabo embobeni.
Ngaphezu amakhemikhali yasendlini, kukhona amakhambi abantu, indlela uthole ezibomvu. Iningi lazo izenzo ifanana wokulinganisa, isimiso lolo. Intuthwane uzama ushevu lolo. Nokho, akazange afe ngokushesha, futhi esabela ke esidlekeni, lapho kwesibeletho buqoshwe, bese udaba angabhekwa ivaliwe.
1. Indlela amanzi ingilazi ikota buhlanjululwe isipuni boric acid. Ukuze lokhu ingezwe ushukela, amathisipuni ezintathu futhi umbhangqwana amathisipuni of uju. lolo lelungiselelwe kufanele batheleka endishini encane bese efakwa ngenyanga endaweni lapho izintuthwane tibheke. Ngesikhathi esifanayo kubalulekile ukuthatha izinyathelo le "uswidi" Awukwazi uzame nezilwane noma izingane.
Indlela 2: Kuyadingeka ukuba zidlule ohamba Izintuthwane nesweli. Lokhu kungadala izinambuzane ukuhamba, ngoba ungathandi garlic.
Indlela 3 kufanele buhlanjululwe ngamanzi unheated nemvubelo engezwa isixazululo ushukela noma into sweet. ukulungele ketshezi viscous is batheleka iziqukathi engajulile wafaka ezindaweni lapho izinambuzane kakhulu akutholakali.
4. Indlela ongakhetha kanjani ukuletha lezi zintuthwane flat engashiyi, ukudala izimo they hamba ngaphansi kulo. Ukuze wenze lokhu, sebenzisa imikhiqizo babulawa yabo. Okungukuthi, amafutha sunflower, lemon, parsley, chamomile, garlic sekushiwo, anise, Mint zasendle kanye clove. Izintuthwane ungathandi izitshalo kanye nokudla ne oyiphunga oqinile. Ukudluliswa izimali wagcoba umzila izinambuzane kanye nezitsha onqenqemeni.
Ukuze balahle lezi izinambuzane, naphezu yinkimbinkimbi msebenzi ngempela namaqiniso. Ngemuva kwesicelo eyodwa noma ngaphezulu (in the eziyinkimbinkimbi) izindlela ezichazwe ngenhla, ngeke zisaba umbuzo kanjani ukuze uthole izintuthwane aphume efulethini, ngoba zinyamalale, futhi isikhathi eside, uma kungekhona phakade.